Akụkọ - Loading Containers For Bangladesh PCR Project
Mbukota na ịkwanye akpa ahụ nke ọma bụ isi ihe na-eme ka mbuga ahụ nwee ọdịdị dị mma mgbe ndị ahịa anyị natara na njedebe nke ọzọ. Maka oru nhicha a nke Bangladesh, onye njikwa ọrụ anyị Jonny Shi nọrọ na saịtị iji lekọta ma nyere aka rụọ ọrụ niile. Ọ hụrụ na ngwaahịa ndị a juru n'ọnụ iji zere mmebi n'oge njem.
Ebe nhicha ahụ dị mita abụọ na otu narị. Onye ahia ahụ chọtara Airwoods maka HVAC na ime ụlọ ọcha na ịzụrụ ihe. O were ụbọchị 30 maka mmepụta ma anyị na-eme ndokwa abụọ 40 ụkwụ containers maka ngwaahịa loading. Ebufere akpa akpa na njedebe nke September. A na-ebupụ akpa nke abụọ na Ọktọba ma onye ahịa ga-enweta ya n'oge na-adịghị anya na November.
Tupu ịkwanye ngwaahịa ndị ahụ, anyị na-enyocha akpa ahụ nke ọma ma hụ na ọ dị mma na enweghị oghere n'ime. Maka akpa nke mbụ anyị, anyị na-amalite site na nnukwu ihe dị arọ, ma kwụnye mbadamba Sanwichi n'ihu mgbidi nke akpa ahụ.
Anyị ji aka anyị mee ihe nkwado osisi iji kwado ihe n'ime akpa. Ma hụ na enweghị oghere dị n'ime akpa maka ngwaahịa anyị na-agbanwe n'oge mbufe.
Iji hụ na ebumnuche ziri ezi na ebumnuche nchebe, anyị debere akara ngosi nke adreesị onye ahịa na nkọwa nkọwa na igbe ọ bụla n'ime akpa ahụ.
E zigara ngwongwo ndị ahụ n'ọdụ ụgbọ mmiri, ndị ahịa ga-anabatakwa ha n'oge na-adịghị anya. Mgbe ụbọchị ahụ ruru, anyị ga-arụ ọrụ nke ọma na ndị ahịa maka ọrụ ntinye ha. Na Airwoods, anyị na-enye ọrụ jikọtara ọnụ na mgbe ọ bụla ndị ahịa anyị chọrọ enyemaka, ọrụ anyị na-aga n'ụzọ mgbe niile.